Maxaad kalasocotaa Marxaladihii uusoomaray midowgii labada gobol waqooyi iyo koonfur?.
Rashiid Shiikh max'med (Danjire)
Madaxbanaanidii Somaliland ,
Umad kasta oo kuhoosnool arxandarida Gumaysiga midabkuudoonaba halahaadee ayaa waxaa hubaal ah in xilli kamida xiliyada waayaha Dunida dhagahoodu maqlidoonaan Xoriyad si ay uga madaxbanaanaadaan gumaysiga ugunaaloodaan Dalkooda Hooyo oo xor ah.
Hadaba Maxmiyadda Somaliland oo in muddo ah latacalaysay siday mar uga madaxbanaanaan lahayd Gumaysigii Boqortooyadii aan gabalkeedu dhicin ee Biritishka ayaa Waxaa lagaga dhawaaqay magaalada London 3-dii may 1960 in Maxmiyadda Somaliland ay helayso Xoriyaddeeda 26-ka june1960 ka.
Wuxuu kudhawaaqay Wasiirkii Mustacmaradaha Engiriisku Maak liyood isagoo kahadlayey Shirkii looga wada hadlayey Xoriyad gaarsiinta Maxmiyadda Somaliland.
Wuxuu sheegay in xukuumada Boqortooyadiisu ay sidhab ah u ogtahay in Hogaamiyayaasha Maxmiyadda Somaliland iyo Siyaasiyiintooduba ay markale kusheegeen sida ay ugagoantahy in aydoonayaan Xoriyad iyo Midow 1-da jully 1960 warsaxaafadeedkoodii ay kasoowada saareen Muqdisho.
Iyadoo lafulinayo ayuu yiri siyaasadda Xoriyad gaarsiinta ee uu ku dhawaaqay Seer leyonokis Biod arinta kusaabsan waxa ay doonayaan Golaha sharcidajintu,waxay Xukuumadayadu diyaar utahay in ay qaadato talaabooyinka loobaahanyahay si arimaha Midowgu ay unoqdaan kuwa mira dhala xilligooda.
Waxaa heshiiskaas usaxiixay dhinaca Engriiska Wasiirakii uqaabilsanaa arimaha Mustacmaradaha.
Dhinaca Somaliland waxaa usaxiixay wafdigii kakoobnaa wakiilkii Engriiska ee Somaliland Seer Doglas iyo afar wasiira Somaliyeed ah.
Sixiixii heshiiskaas kadib waxaa halkaas kahadlay Wasiirkiii Mustacmaradaha oo sheegay in Engriisku uu siinayo kaalmo Dhaqaale Xoriyadda kadib,Taas oo sandkasta ay u helidoonaan sijoogta ah.
26-june 1960 kii waxaa Somaliya oo dhan looga dabaaldagey Xoriyadda Gobolada waqooyi kuwaas oo ahaa gobolkii ugu horeeyay dalka somaaliya ee baaxadda wayn oo hela Xoriyadiisa.
Waxaa wasaardii ugu horaysay madax kanoqday Mudane Maxamed ibraahim Cigaal taas oo Shan maalmood kadib kubiirtay 1-jully 1960 kii Somaliwayn ayana wada qaateen magaca Jamhuuriyadda Somaliya.
Xafladdii Xoriyadda ee Maxmiyadda Somaliland waxaa kasooqayb galay wafdi Somaliyeed oo uu hogaaminayey Mudane Aaden C/lle Cismaan, Safiirkii Midowga Carabta u fadhiyay Somaliya Al-sayid muxib Al-samra iyo Safiirkii Maraykanka ufadhiyey Somaliya oo wakiil ka ahaa Dowladiisa iyo wariyayaal badan.
Hadaba ma ahan arin sahlan in ay Dal iyo Dad balaaran ay hal marwada helaan Xoriyad iyo Midow wada jira,Mana ahan in waqti yar iyo maskaxyar toona lagu helay.waxaa hubaal ah in ay dibindaabyo badan loomaray dadbadanina kuwaayeen Naftoodii iyo Maalkoodiiba.
Waxaa hubaal ah in dadkii maalintaa joogay iyo kuwa manta uu u dhaxeeyo farqi wayn iyo argtiyo kaladuwan!!.Waayo kuwii hore waxay qabeen in inta lahayo lamideeyo inta maqana labaadidoono,Sidaana dhidibada loogutaago Somaliwayn leh Calan iyo Ciidan qura.Halka kuwa manta ay qabaan in Beelkastahiba noqoto Dowlad Calan iyo Ciidan ugaara leh.
iskusooduube waxaa hubaal ah in ay natiijada kadambaysa ay tahay mid aan lamahdindoonin mustaqbalka dhow iyo kan fogba.
Talyanaigu muxuu kayiri midowgii iyo xoriyaddii somaliya?:
Dowladda Talyaaniga oo kamid ahayd Dowladihii lagu jabiyey Dagaalkii labaad ee Aduunka ayaa dadaal wayn ugashey sidii somalidu gacnteeda ugu baaqi ahaan lahayd,soona bandhigtay qorshe ah in Somaliya Maxmiyad lagaliyo .Taas oo ay ulajeeday in somaliya gacanteeda kusii jirto xilli kale. iyadoo kacabsanaysay in maadaama ay kamid tahay xulafadii lagujabiyey Dagaalkii labaad ee aduunka ay suuragaltahay haddii Somaliya ay hesho xoriyad iyo Midow wada jira ay waynayso dana badan oo ay kulahayd Somaliya.
Sidoo kale haddii somalidu kuguulaysan lahayd kamidnoqoshada Dowladihii Barwaaqosooranka ee Engriisku horboodayey,wuxuu Talyaanigu khsaari lahaa 70% maalgashigii uu kusameystay Somaliya.
Sidaa owgeed ayuu Talyaanigu kashaqeeyay in aan Engiriisku soogalin arimaha Somaliya isagoo ay taageerayeen jaaliyadihii Somalida iyo Dagaalyahanadii somalida oo ahaa 20,000 kuwaas kabarbardagaalamay Ciidamadiisii xiligii uusocday dagaalkii 2aad ee aduunku.
Talyaaniga oo kuguulaystay xiligii Maxmiyadda inuu sii xoojiyo xiriirkii joogitaankiisa iyo iskuxirka suuqyadii Ganacsi,iibgaynta badeecadaha kalagadisan iyo arimo kale oo dadajinayey danihiisa ayaa ku dhawaaqay in arinta kusaabsan dhalashada Dowlad Somaliyeed oo madax banan oo kakooban Somaliya iyo maxmiyaddii Somaliland laga bilaabo 1-da jully 1960-ka ay tahay arin aan Tallyaaniga khuseyn,balse ay tahay mid utaala Somaalida oo kaliya.Taas oo ahayd diidmo cad oo uu kudiidanaa Midowga iyo Madaxbananida Somaalida si aanay u dhumin danihiisii Dhaqaale, Ganacsi iyo Siyaasadeed.
Engiriiska muxuu kayiri ?:
Engiriisku oo ahaa Dowladii u istaagaty burburinta iyo qaybqaybinta wadankii somaliwayn shantiisii qaybood,Gacantana u galisay qaybo kamid ah Ethiopia iyo Kenya.islamarkaana kufashilmay mashruuciisii ahaa in Somaliya ku biirto Barwaaqasooranka amaba ay maxmiyadeeda hoostimaado ayna horyaaleen dalabshadii shacabiga Somaliland ay kadalbanayeen madaxbananida ayaa ku dhawaaqday mowqifkeeda ku aadanaa Somalaiya.waxuuna sheegay in aysan aqoonsanayn mabda,ahaan midowga Konfurta iyo Waqooyiga waxaana waajib ah ayuu yiri in ay arinkaas kawada hadlaan Talyaaniga iyo Engiriiksu.
Ethiopia muuqaalakee ayey kabixisay?:
Afhayeen wasaradda arimaha dibadda ugahadlay magaalada London ayaa sheegay in ay xabashidu doonayso Xoriyadda Somaliya,laakin Midowga labda gobol uu dhibaato kuyahay shucuubta gobolka dagan nabadgalyadooda,suuragalna maahanbuu yiri in an aqbalno Midowga Somaliya oo ulajeedadeeda dhabta ahi tahaybuu yiri isticmaar cusub.
Sidoo kale Embaraadoorkii xabashida yaa uyeeray safiiradii u fadhiyey Marykanka,Engriiska,Faransiiska iyo yoguslafiya uuna kulakulmaey Qasriga madaxtooyada. wuxuuna usheegay safiirada xaaladda kahtarta ah oo soo waajahday Geeska Afrika,Wuxuu kaloo u shegay in xabashidu aysan marnaba aqbalayn danaha shihseeyaha taas oo khatar ku ah Nabadda iyo jiritanka xabashida.isagoo hadalkiisii siiwatana wuxuu yiri "Naadinta lanaadinayo midaynta Somalaiya waa arin ku qotonta dano ajnabi kuwaasoo ah wajiga kowaad in xabashida lagagooyo gobolada buurlayda ee kuyaala bartamaha xabashida. Wuxuuna kusoo gabagabeeyey in ay xabashidu si xoog leh udiidantaay shirqoolkaas.
Fransiiska siduu u arkay midowga iyo madaxbananida somaaliya?:
Faransiiska oo markasta kasoo horjeeday Xoriyadda iyo Midowga Somaliya toona ayaa jenaraal Deegool ku dhawaaqay 1959 in Somalida faransiisku gumaysto (jabuuti) ay tahay mid aan marnaba kago,ayn faransiiska.
Maraykanka: waa maxay aragtida maraykanku?:
Waxaa jiray dano Dowladda Marykanku kalahayd somaliya oo sooifbaxay markuu dhamaday Dagaalkii labaad ee aduunku kuwaas oo uu doonayey in uu saldhigyo milatari kahelo Geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia iyo Somaliya iyagoo waliba sigaara udanaynayey Somaliya,Waayo Dhulka somalida oo lahaa Xeebo aad ubalaaran oo Maraakiibta Ciidamdiisu ay dagikaraan meeshii aydoonaan.Halka Xabashidu aanaylahayn Bad.Sidoo kale wuxuu kudadaalay Maraykanku inuu xubin kanoqdo 4tii Dowladood oo looxilsaaray Xoriyadgaarsiinta Somalida inkastoo aanu kuguulaysan.
Markii uu kuwaaqay Ninkii masuulka uga ahaa Talyaaniga maamulkii Mustacmaradda ee Somaliya in uusoo dhawaaday waqtigii madaxbanaanida Somalidu,Ayaa Safiirkii Maraykanka ee Rooma ufadhiyey warsaxaafadeed kasoosaaray arintas wuxuuna yiri "Madaxbanaanida Somalidu ee 1960-ku waa arin aan hadda loo fadhin waayo buuyiri Dowlad sidaan oo kale ah oo aan lahayn ilo waxsoosaar,Dhaqaale Siyaasad fadhisa oo aan awoodin in ay Nafteeda meel mariso ayna kaligeed nolaato iyadoo dowlad ah waamid aan suuragal ahayn xilagaan.Sidaa owgeed waxaa looqaataa oo ukhayrbadan mustaqbalkeeda in ay kubiirto imbiraadooriyada Xabshida
Akhristow waxaad halkaas kagarankataa xaaladaha adag ee ay soomareen labadii marxaladood ee adadkaa Midowgii iyo madaxbanaanidii iyo sida aanloodoonayn toona.
waxaad halkaa kafahmikartaa cadaawada fog ee looqabo jiritaanka shcabiga somaliyeed horumarkiisa,midowgiisa iyo mustaqbalkiisa toona.
Sidoo kale waxaa xusid muda in dadkeena badankood haddii aanayba ahayn dhamaantood ay kayihiin arimahaa dushooda iyo dalkooda kadhacaya oo dhan "Lax dhukani abaar moog".
markase laiskusooduubon fikradaha iyo argtiyada lagakalabixiyey ayaa kutusaya waxyaaba badan oo daahan oo ubaahan in dibloo eego sixog ogal loogunoqdo.
Hadaba ma mudanyihiin Dalkii iyo Dadkii dhibkaalagasoomaray xoriyad gaarsiintooda iyo midayntoodaba in manta 45 sano kadib lookaljarjaro imaarado yaryar iyo qabaailo dagaalamya?
Jawaabta su,aashan ayaa ah mid lagadoonayo muwaadinkasta ee somaaliyeed ee leh damiir nool iyo dareen soojeeda.
Qabtii 1aad ka akhri halkan......